IiNkqubo zeNkxaso zeWebhusayithi kwiShishini lakho ngokutsho kweSemalt
Lisa F. Aguirre
Ukuba ufanele usebenzise idatha yeshishini lakho, uphando okanye umsebenzi, akukho nto ebi ngaphezu kokulinda iphepha ukulayisha kwiNetscape Navigator okanye kwi-Internet Explorer. Ngethuba xa usebenzisa i-intanethi, unokujamelana nengxaki yoxhumo olutshanje kwaye unokulahlekelwa lukhulu lweminatha oyifunayo. Ukuba ukhangele iwebhusayithi enkulu okanye ibhulogi ngamaphepha amawaka, kufuneka ucofe iqela lakho lexesha ukuze ufumane loo maphepha avule kakuhle. Ngombulelo, iinkqubo ezikhethekileyo zeekhredithi zewebhu zenza kube lula ukuba ulayishe izingosi zakho ezizithandayo ngaphandle kweengxaki. I-intanethi yewebhu ngokwenene yinkqubo enceda abaphandi, intatheli, abafundi, abashishini, kunye nabathengisi ukuba bakhuphe idatha ngokufanelekileyo kwaye bajonga iphepha elithile lewebhu ngokukhawuleza. Ezinye zezixhobo ezichanekileyo zichazwe apha.
Ukusuka kwiOffline yenye yeyona i-intanethi eyaziwayo kunye neyaziwayo kakhulu kwi-intanethi. Ngeli sixhobo, unokugqiba ukuba ungaphi na izinto ongathanda ukuzikhuphela, kwaye akukho mda kumanqaku okufuneka ukhishwe. Kwakhona, awudingi iFTP kwiwebhusayithi yakho ukukhuphela idatha. Esi sixhobo sihambelana neWindows, Vista, XP kunye nezinye iinkqubo zokusebenza ezifanayo.
2. Iwebhusayithi eXtractor:
Ngenye yeenkqubo eziqhenqileyo nakwiindawo ezidumileyo zewebhu. I-eXtractor yeeWebhsayithi ilungile kubini abaprogram kunye nabangabinkqubo kwaye yenza uphando lwakho lwe-intanethi lulula kwaye lukhawuleze. Unokuzikhuphela kwiwebhusayithi okanye kwiindawo zayo usebenzisa le sixhobo esinamandla..Kuyaziwa ngokuba yinkqubo yomsebenzisi kunye nolawulo lwepaneli yolawulo olukunceda ukuseka nokuhlela nayiphi na idatha ngendlela engcono. I-eXtractor ye-intanethi iyahambelana nayo yonke iinguqulelo zeWindows kunye ne-iPhone.
I-Sitesucker yinkqubo enkulu ye-Mac ekhusela isayithi kwaye izisa utshintsho kwi-intanethi yakho. Iyakwazi ukukopisha ngokukhawuleza iphepha elifunayo, imifanekiso, iifayile kunye neepsksi kwi-hard drive yakho usebenzisa i-offline. Ufuna ukufaka i-URL kwi-SiteSucker isikhombisi, kwaye izakukhuphela ngokuzenzekelayo idatha efunwayo. Le nkqubo ifuna iMac OS X 10.11 kwaye iyakhutshwa kwiwebsite yeSayithi.
I-Trab-a-Site yenye yezona zinto zinamandla kakhulu . Isebenza kokungaxhunyiwe kwi-intanethi kunye ne-intanethi kwaye ingenza iikopi zewebhusayithi ngamaxesha amaninzi, kunye neefayile zayo ezixhasayo ezifana nemifanekiso, iphepha, iifayile ezivakalayo kunye namavidiyo. Esi sixhobo sinokubamba iifayile ezivela kwiindawo ezahlukeneyo ngexesha elinye, ukugcina ixesha elininzi kunye namandla. Iyahambelana ne-ASP yakho, PHP, iCold Fusion kunye neelwimi zeJR kwaye ungayijika kwi HTML HTML. Le nkqubo yokukhulula isebenza kwiWindows 7, Vista, XP, Windows Me, kunye neWin98.
5. IWebWhacker 5:
Isikhangeli sesigqabi seBlue Squirrel sithiwa yiWebWhacker 5. Isenokukhuphela isayithi lonke kwi diski yakho yabasebenzisi abangasebenziyo ngaphandle kwaye isebenza njengoqeqesho indawo yootitshala nabafundi. Kulula ukumisa kwaye ihlolisise rhoqo idatha yakho yekhwalithi, ilungise kwaye ihlaziywe njengemfuno zakho. Ngaphezu koko, iWebWhacker inokuphinda iphinde iphindwe izikhokelo zesayithi yakho kwaye iyahambelana neVista, XP kunye ne-Windows 7.